Ny zavatra nianarako tao amin'ny CloudCamp | Martech Zone
Ny zavatra nianarako tao amin'ny CloudCamp
Alakamisy Febroary 5, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Na dia nihemotra (1 herinandro) noho ny orampanala tamin'ny herinandro lasa aza, CloudCamp Indianapolis nandeha tsy nisy sakantsakana androany alina. Raha ianao tsy avy any Indianapolis - tokony hamaky hatrany ianao. CloudCamp dia somary vaovao ary atao any amin'ny tanàna lehibe erak'izao tontolo izao. Misaotra ny lohahevitry ny lohahevitra sy ny fitarihan'ny orinasa BlueLock, nanao hetsika mahomby tao Indy izahay.
Raha manontany tena ianao inona izany Cloud Computing izany, Bluelock dia nanome adihevitra vitsivitsy momba ny famaritana ity fe-potoana somary mikorontana ity.
Cloud Computing any Indianapolis?
Indianapolis dia misarika ny saina amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena noho ny vidiny ambany sy marin-toerana mifandraika amin'ny herinaratra sy trano sy tany - antony roa lehibe hamaritana ny vidin'ny fampiantranoana. Ho fanampin'izany, matanjaka ny toetr'andro ary fihaonan-dàlana manerana ny hazondamosin'ny Internet any Amerika Avaratra isika. Raha mampiantrano ny fangatahanao ao amin'ny trano fitahirizam-bokatra any California ianao izao - dia mety te hijery ianao!
BlueLock dia mpitarika iraisam-pirenena amin'ny Cloud Computing
Mila marin-toetra aho, arakaraka ny maheno an'i Pat O'Day no miteny, vao mainka matahotra ny haben'ny fahafantaran'io tovolahy io ny momba ny computing cloud, computing utilise, computing grid, fitantanana trano fitahirizam-boky, Virtualization, VMWare… ianao no manome an'io anarana io ary fantatr'ilay rangahy izany. Malemy paika izy, tsara fanahy ary manana fahaizana hafahafa miresaka amintsika vahoaka izay tsy mahay teknolojia amin'izany indostria izany!
Tsy manambany ny hafa amin'ny ekipa aho! John Qualls sy Brian Wolff dia mpinamana be fa anio kosa dia i Pat no nisongadina.
Sintomy ny fivoriana: Scalability amin'ny app
Ny iray tamin'ireo fivoriana natrehiko dia notarihin'i Ed Saipetch. Niasa tao amin'ny The Indianapolis Star i Ed raha nanao izany aho ary nanamboatra ny ankamaroan'ny scalability sy ny fampiharana ao amin'ny gazety. Nesoriny ny majika tamin'izany fotoana izany - tsy dia nanana loharanom-bola firy ary betsaka ny fangatahana fananganana rindranasan'ny orinasa amin'ny teti-bola manify.
Ed nizara taonina iray momba ny fitaovana vaovao azo ampiasaina amin'ny fanandramana mavesatra mandeha ho azy sy ny fitsapana ny hafainganana amin'ny fampiharana ary koa ny adihevitra mahasoa momba ny maritrano ary ny dikan'izany amin'ny fitomboana mihombo sy ny fametahana azy. Tena tiako ilay resaka.
Ny teny hoe sharding ve dia teny teknika?
[Ampidiro ny hehy Beavis sy Butthead]
Nifanakalo hevitra mihitsy aza izahay sharding, teny iray izay notehiriziko ho an'ny vazivazy amin'ny fandroana izay hitako tamin'ny sarimihetsika indray mandeha. Sharding raha ny marina dia fitaovana iray hampihenana ny rindranasao, fa tsy barabariana, amin'ny alàlan'ny famoronana kopia tahiry vaovao sy fanosehana ny mpanjifa any amin'ny tahiry samihafa fotsiny mba hanamaivanana ny fanaintainan'ny mikapoka angon-drakitra tokana foana.
Fialana fivoriana: Cloud ROI
Ny vidiny mifandraika amin'ny informatika rahona dia mety miovaova be - tsy misy na inona na inona mankany amin'ireo rafitra voahaja sy voaro mafy. Ny tsiro BlueLock dia ny Infrastructure as a Service - izay ahafahanao mamoaka ny aretin'andoha rehetra amin'ny Infrastructure amin'ny ekipany mba hahafahanao mifantoka amin'ny fametrahana sy ny fitomboana!
Niditra tao amin'ny resadresaka Return on Investment aho izay nieritreritra fa hanana lesona mafonja tokoa isika amin'ny famakafakana ireo loharano ilaina amin'ny fampiantranoana nentim-paharazana sy cloud. kosa, Robby Slaughter nitarika adihevitra miavaka momba ny mahatsara sy maharatsy azy roa ary niresaka momba ny fanalefahana ny loza.
Ny risika dia isa azon'ny ankamaroan'ny orinasa hametrahana isa… ohatrinona ny vidiny raha tsy afaka mitombo eo noho eo ianao? Ohatrinona ny vidiny raha midina ianao ka mila mamerina tontolo iainana voaverina? Ireny vidiny ireny, na very vola, dia afaka manaloka ny nikela sy dimy voadinika amin'ny fampitahana nentim-paharazana.
Misaotra manokana an'i BlueLock tamin'ny hetsika iray nampiantranoina tamim-pahagagana (natao ho an'ny daholobe). Tsy andriko ny hody sy hitoraka bilaogy momba ny sharding.
Tags: rahonarahona computingcloudcamp
Atsaharo ny fitoriana ny tambajotra sosialy amin'ny orinasa
Tsy mora kokoa amin'ireo mpivarotra izany
5 Feb 2009 tamin'ny 10:31 maraina
"Niresaka momba ny sharding mihitsy aza izahay, teny iray izay natokana ho an'ny vazivazy efitra fandroana izay hitako tamin'ny sarimihetsika indray mandeha."
Nihomehy mafy aho, somary nikoropaka kely.
Indray, [Ampidiro i Beavis sy Butthead mihomehy]
5 Feb 2009 tamin'ny 10:47 maraina
Misaotra tamin'ny plug, Doug! Cloudcamp dia hetsika lehibe.
Tsy tao amin'ny resak'i Ed momba ny sharding aho, saingy nieritreritra aho fa hanazava fa tsy voatery ho “barbariana” io fomba fiasa io. Matetika, ny sharding dia manondro ny fanaparitahana ny angon-drakitrao amin'ny alàlan'ny tsipika misy hadisoana manokana amin'ny fampiharana. Ohatra, raha tsy misy fiantraikany amin'ny angona avy amin'ny mpanjifa iray na oviana na oviana ny angona avy amin'ny mpanjifa iray, dia azonao zaraina ho fizarana roa ny angonao fototra: AL sy MZ.
Ho an'ireo lehilahy fitahirizana (toa an'i Ed) dia karazana vahaolana tsy misy dikany izany, satria midika izany fa tsy maintsy mitazona angon-drakitra marobe izay voalamina tsara amin'ny fomba mitovy. Saingy fomba tsara hampitomboana ny fampandehanana nefa tsy manampy vola be!
Febroary 5, 2009 amin'ny 7:47 PM
Mety tsara kokoa ny teny crude, Robby. Fanazavana lehibe - vahaolana mahomby io, somary mahery setra fotsiny.
6 Feb 2009 tamin'ny 11:36 maraina
"Hery mahery" dia marina. Fantatrao anefa ilay fitenenana taloha hoe: “Raha tsy miasa ny herisetra dia mety tsy ampy ny fampiasanao!”